Mandroso Stampings - China QiDi Plastic hamolavola
Miandalana nohitsakitsahiko dia metalworking fomba izay mety hanodidina punching , coining , hiondrika sy ny maro hafa ny manova fomba metaly manta ara-nofo, miaraka amin'ny rafitra sakafo mandeha ho azy.
Ny rafitra sakafo manosika ny lavalava ny vy (araka ny unrolls avy amin'ny coil) amin'ny alalan'ny rehetra, ny toby ny miandalana nohitsakitsahiko maty. Fiantsonana tsirairay manao asa iray na maromaro mandra-vita anjara no natao. Ny farany dia cutoff fiantsonan'ny fandidiana, izay mampisaraka ny vita ampahany avy ao amin'ny habaka mitondra. Ny mitondra tranonkala, miaraka amin'ny vy izay totohondry lasa amin'ny teo aloha asa, dia raisina ho toy ny korontam-by . Samy efa tapaka izy, Nandondòna teo (na ho afaka amin'ny maty) ary avy eo dia nandroahana azy avy any amin'ny maty napetraka, sy amin'ny famokarana faobe Matetika no nafindra ho korontam pako ara-nofo amin'ny alalan'ny ambanin'ny tany tamy conveyor fehikibo.
Ny tsikelikely nohitsakitsahiko maty dia apetraka ho reciprocating nohitsakitsahiko gazety . Araka ny gazety mihetsiketsika izy, ao an-tampon'i maty mihetsiketsika miaraka aminy, izay mamela ny zavatra hiandry. Raha ny asa fanaovan-gazety mihetsiketsika izy, ny maty Mifarana sy mahatanteraka ny nohitsakitsahiko fandidiana. Isaky ny asa fanaovan-gazety tapaka lalan-dra, ny ampahany vita dia esorina avy amin'ny ho faty.
Koa satria ny asa atao fanampiny isaky ny "toerana" ny maty, dia zava-dehibe ny esory tsy azo naroso tena indrindra, mba aligns vitsivitsy thousandths iray santimetatra araka mandrisika avy amin'ny gara ny fitobiana. Bullet miendrika na bongo "mpanamory" nandefona hiditra teo aloha tao amin'ny lavaka boribory esory ny antoka izany satria ny sakafo fampifanarahana rafitra matetika dia tsy afaka manome ny ilaina fametrahana mazava tsara ao amin'ny halavan'ny fahana.
Miandalana nohitsakitsahiko Azo novokarina tamin'ny famindrana milina fanontam-pirinty. Ireo no milina fanontam-pirinty fa hamindra ny singa avy amin'ny gara iray ho any amin'ny manaraka, amin'ny fampiasana ny mekanika "rantsan". Fa faobe famokarana ny faritra izay tsy laniny no mitaky sarotra in-mpanao gazety asa, dia tokony hatao foana ny mampiasa ny gazety tsikelikely. Iray amin'ireo tombontsoa io karazana asa fanaovan-gazety dia ny famokarana tsingerin'ny fotoana. Arakaraka ny anjara, dia afaka mora foana vokatra maherin'ny 800 hihazakazaka faritra / minitra. Ny iray amin'ireo fatiantoka ity dia karazana gazety fa tsy mety ho marina tsara avo lalina sary izay raha ny halalin 'ny nohitsakitsahiko mihoatra ny savaivony ny anjara. Raha ilaina izany, ity dingana ity dia tanterahina eo amin'ny famindrana gazety, izay mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha miadana, ary miantehitra amin'ny milina rantsan-hihazona ny singa ao an-toerana nandritra ny tsingerin'ny forming manontolo. Kanefa kosa raha ny amin'ny tsikelikely gazety, afa-tsy ampahany amin'ny fananganana tsingerin'ny dia tarihin'ny lohataona feno tanany, na mitovy, izay hiteraka concentricity sy ovality olana ara-nofo sy ny tsy hatevin'ny fanamiana. Hafa miandalana ny fatiantoka ny milina raha oharina amin'ny milina fanontam-pirinty hamindra dia: nitombo manta ara-nofo torohevitra takiana mba hamindra faritra, dia fitaovana lafo kokoa satria natao tamin'ny vato tsy miankina amin'ny zara fitsipika isan-toerana; tanteraka hanao dingana ao amin'ny gazety izay mitaky ny ampahany miala ny esory (ohatra beading, necking, flange Curling, kofehy Rolling , Rotary nohitsakitsahiko etc.).
Ny maty dia matetika vita amin'ny fitaovana vy mba hanohitra ny avo Loading taitra anjara, hitana ny ilaina fanapahana maranitra sisiny, ary manohitra ny Marokoroko sy hery anjara.
Ny vidiny dia tapa-kevitra araka ny isan'ny endri-javatra, izay hamantarana ny zavatra tooling dia mila hampiasaina. Nanoro hevitra ny mba hitandrina ny endri-javatra araka izay tsotra araka izay azo atao mba hitandrina ny vidin'ny tooling ho faran'izay kely. Lafin-javatra izay miaraka akaiky miteraka olana satria mety tsy hanome fahazoan-dalana ho ampy ny totohondriny, izay mety amin'ny toerana iray hafa. Mety ho olana ny hanana fanapahan-jiro sy ny protrusions tery.
Ohatra tsara dia tsara ny vokatry ny iray no maty miandalana ny sarony ny zava-pisotro Can . Fanintonan'ny vakizoro atao miandalana nohitsakitsahiko dingana iray sy ny sarony & fivoriana atao hafa, ny fihoaram- niara-kiheba nandrasana amin'ny zoro tsara ho any an-sarony & fivoriana dingana.